Akanakisa Logo Zvivakwa paInternet
Logo Dhizaini Zvishandiso: Zano, Kurodha pasi, Infographics, Uye Akanaka Maitiro
Chitatu, November 4, 2020 China, Kurume 11, 2021 Douglas Karr
Ndeipi kukosha kwechiratidzo? Bvunza kambani yakaita saNike uye iwe ungati mamirioni emadhora - asi chokwadi ndechekuti, muna 1971, Nike akabhadhara $ 35 ye logo yavo. Mazuva ano, iyo yekuenda chiyero chehunyanzvi logo dhizaini inogona kuve chero iri pakati pe $ 150 ne $ 50,000. Isu nguva pfupi yapfuura takashanda nemutengi uyo akashandisa $ 16,000 pane logo dhizaini chete kuti vawane pavakaita Google Image Kutsvaga indasitiri yavo… ivo vakabvisa iyo firm uye vakaita online dhizaini makwikwi panzvimbo ye $ 250 uye vakawana yekutanga, yakasarudzika, uye yakagadzirirwa-logo iyo inokwana yavo yakazara chiratidzo.
Isu tinonyatsoona kukosha mune yakazara chiratidzo, yekumaka gwara, uye inoperekedza logo. Icho chinogona kuve chakakosha kudyara, asi makambani akaita mari yacho akanyatsoona mhedzisiro. Dzimwe nguva haungakwanise kuwana izvozvo, zvakadaro, uye isu tinonzwisisa! Kana iwe uchingoda logo, mukutendeseka kwese kune zvimwe zvinoshamisa zviwanikwa kunze uko.
Heano anopfuura makumi mashanu emadhizaini dhizaini zviwanikwa zvandakawana online, kubva kufemerwa kune mibairo, kumakwikwi uye kuwanda kwevanhu, kune mablog uye enhoroondo nzvimbo. Nakidzwa!
Ida iyi vhidhiyo yemugadziri achinyatso kugadzira logo muAdobe Illustrator.
Maitiro Ekugadzira iyo Yakakwana Logo
Tsvaga izvo zvinotora kuumba yakanakira logo neaya gumi akakosha logo dhizaini matipi kubva Just Creative, uyezve logo dhizaini infographic! Nakidzwa.
Iyo logo inofanirwa kuve nyore.
Iyo logo inofanirwa kuve nguva.
Iyo logo inofanirwa kuve utsanzi.
Iyo logo inofanirwa kuve verengeka.
Iyo logo inofanirwa kuve adaptive.
Iyo logo inofanirwa kuve wirirana.
Iyo logo inofanirwa kuve siyana.
Iyo logo inofanirwa kuve Zvakakodzera.
Iyo logo inofanirwa kuve akachenjera.
Iyo logo inofanirwa kuve nyanzvi.
Dzimwe nguva iwe unoziva zvaunoda, asi unongova usina tarenda rekutora yako napkin sketch kune yehunyanzvi logo.
Logotypes - Isa sketch (pikicha ine foni yako, PowerPoint faira, kana pendi muPendi) uye isu tinozoichinja ikaita logo huru mukati memaawa.
Gadzira Yako Yako Logo
DesignEvo iri online logo mugadziri iyo inokubatsira iwe kugadzira yakasarudzika uye hunyanzvi marogo emahara. Ivo vanopa anopfuura mamirioni emifananidzo anowanikwa kutsvaga mukati, mazana emafonti emavara uye maumbirwo aunosarudza kubva uye chishandiso chakasimba chekugadzirisa kuita logo yako.
Kutanga Kuvaka Yako Logo
Crowdsourced Logo Dhizaina zviwanikwa:
Crowdsourced masaiti ane ekuparadzira maratidziro e graphic vagadziri vanogona kuendesa marogo. Uyo anokunda anopiwa mari. (Yakakura iwe ... haigare yakanakira ivo vagadziri!)
Makorokopo - vanhu vazhinji kubva kumadhora mazana maviri.
DhizainiContest - tangisa yako makwikwi kubva ku $ 100.
DesignCrowd - Unoda Dhizaini Dhizaini? Crowdsource Yako Dhizaini Pamhepo Zvino!
Dhijitari Point - tumira yako wega mutengo nezvinodiwa mumaforamu aya.
eYeka - makwikwi emakorokoza uko iwe unodoma yako wega mutengo (upscale mitengo uye mibairo).
48hoursLogo - dhizaini dhizaini kubva ku $ 89
Graphic Makwikwi - makwikwi kubva pamadhora chiuru
GraphicRiver - logo dhizaini uye matemplate
Hatchwise - makwikwi kubva ku $ 100
LogoMyWay - makwikwi kubva ku $ 200.
LogoTournament - Tora logo iyo iwe yaunoda chaizvo nekusarudza kubva pa50-200 + tsika dhizaini kubva ku $ 275.
99designs - vanhu vazhinji dhizaini kubva ku $ 211
MycroBurst - vanhu vazhinji kubva kumadhora zana nemakumi mapfumbamwe nemana
pickyDESIGNS - Gadzira yako yemakwikwi dhizaini
ZenLayout - makwikwi anotangira pamadhora mazana maviri nemakumi mashanu
Professional Logo Makambani:
MaAgency anopa logo masevhisi anowanzo vimbisa kuti basa ravo rakasarudzika uye vanoshanda kuenzanisa logo yako neyako yakazara brand.
Inodhura Logo Dhizaini - mapakeji kubva $ 45.
BusinessLogo.net - mapakeji kubva $ 99.
BXC - yekumakambani kambani, kumbira mutengo.
Company Folders - kubvunza kwemahara, dhizaini dhizaini inotangira pamadhora makumi manomwe nemashanu paawa
Infinity Logo Dhizaini - zvigadzirwa kubva $ 89
Inkd - nyanzvi dhizaini mapakeji kubva $ 99
LogoBee - zvigadzirwa kubva $ 199
Logo Fekitori - logo magadzirirwo kubva $ 395
Logo Dhizaini Dhizaini - mapakeji kubva $ 149
Logo Yepasi rose Dhizaina Agency - kutaurirana kwemashoko
Iyo Logo Loft - mapakeji kubva $ 99.
LogoMagic.com - mapakeji anotangira pamadhora 269.
LogoNerds.com - mapakeji anotangira pa $ 27.
Kusungira - mapakeji anotangira pa $ 250.
Logoworks - kubva kuHP, dhizaini kubva ku $ 299.
Iyo NetMen - dhizaini inotangira pamadhora zana nemakumi mapfumbamwe nemana.
Vistaprint - pre-yakagadzirwa uye otomatiki marogo anotanga mahara uchishandisa masevhisi avo.
Logo Kufuridzirwa Sites:
Zvichida iwe unoda kuyedza kugadzira yako logo kana kuwana mashoma anokurudzira iwo aunoreva! Heano mamwe makuru masosi masaiti emalogo.
Blog-omotives - kubva kuna branding chipangamazano Jeff Fisher
Creattica - saiti kubva Envato
Akakurumbira Logos - webhusaiti yakatsaurirwa kukuunzira dzimwe dzakanakisa nhau, wongororo, uye ruzivo rwakanangana neye logo dhizaini indasitiri.
Logobird - Logobird ndeyeLondon-yakavakirwa dhizaini blog & studio.
Iyo Logo Kambani - Tsika Dzakashongedzwa Dhizaini… kutora dhizaini kuenda kumatunhu matsva
Logo Bliss - logo dhizaini kufemerwa uye gallery saiti.
LogoPond - Logopond inoratidzira akanakisa mune ekuzivikanwa basa kubva kwakatenderedza webhu Logo muimbi kubva pamatanho ese ekuvandudza uye nzvimbo dzepasi rino kazhinji saiti ino.
Logo Blog - Logo Blog yakatsaurirwa kuve webhu yekutanga sosi ye logo dhizaini.
Logo Dhizaini Blog - Logo Dhizaini Dhizaini iri blog rinotarisana zvakaringana pakushambadzira, logo & dhizaini dhizaini.
Logo Kubva Kubva Zviroto Mipiro - bhurogu ine inotumirwa pamwedzi uye anokunda pamwedzi.
Logolog - Logolog iri blog nezve logo dhizaini.
Logolounge - nhau uye maitiro pane marogo.
Midhiya Bistro - yegore logo mibairo saiti.
Yangu Logo ye Highbridge
Makore apfuura, mugadziri wangu akaona logo yangu uye akaramba achindibvunza kana ndichida kuti ivandudzwe. Ndakaramba ndichiti kwete akabva andipa neshanduro yake…
Uyu muenzaniso unonakidza wechimwe chinhu chakasarudzika uye chisingakanganwike (mumaonero angu). Iyo nyanzvi yakaita zvinhu zvakati wandei:
Akabatanidza zvese d uye k (mhando ye)
Akashandisa museve wepamusoro kuratidza kugona kwangu kubatsira vatengi kukura.
Akashandisa zvisizvo zvisingaenderane pamativi ese echiratidzo kumiririra kuti ini ndanga ndisingaite zvinhu zvakajairika.
Kunyangwe ini ndisina kana kumbomubvunza nezve kugadziriswazve, ini ndakabva ndangodanana nemumiriri wayo. Ini ndanga ndichigadzira zvekare makadhi, zviratidzo zvangu, uye webhusaiti yangu mangwana acho!
Tenga Vector Logo mafaera ekugadzira Wako Pachezvako
Tinoda vatsigiri vedu pa Depositphotos uye vane toni yemarogo yaunogona kutenga iyo vector mafaera. Ona chimwe chinhu padhuze pane chaunoda? Tenga iyo, dhawunirodha uye uigadzirise kuti ive yako!
Tenga maVectors Zvino!
Kuzivisa: Tiri kushandisa zvakabatana zvinongedzo pane ino positi.
Zvimwe Zvinyorwa uye Infographics
Maitiro ekugadzira yakasarudzika uye isingakanganwike logo
Iko kushanduka kwemarogo
Logo Colors yeWebhu
Tags: zvinotyisa logo zvigadzirwayakanakisa logo dhizaini kambaniyakanakisa pamhepo logo dhizainiyakanakisa pamhepo logo dhizaini sevhisitenga logotenga logozvakachipa logo dhizaini onlinezvakachipa malogo onlineboka revanhu logo logomhodzicrowdource logo dhizainichaunga logohuwandu hwevanhu logo dhizainikuwanda kwemashizha logokuwanda kwemalogowobvagadzira mucherechedzodesign logodesigncontestyakagadzirwainternet logo dhizainikungogadzirarondedzero yemasaiti masaitilogologo mufarologo bloglogo dhizaini kambani wongororologo dhizaini makwikwilogo infographiclogo kurudzirologo nzvimbologo kuongororalogo vectorslogoloungelogopondlogoskushambadzira logo mazanomedia bistrokupi kwekutenga logo
Instapage: Yako Yese-In-Imwe PPC uye Ad Campaign Yekumhara Peji Solution
Jun 6, 2010 pa 10: 40 PM
Douglas - Tinotenda nekutisanganisa mune yako runyorwa.
FYI tangoparura nzira itsva, yakanaka ye 'hybrid crowdsourcing' apo vatengi vanogona kukoka uye kubhadhara vagadziri chaivo kuti vaendese kumakwikwi ekugadzira - ona kuburitswa kwenhau kubva nhasi: http://prwire.com.au/permalink/18300/design-contest-website-launches-hybrid-crowdsourcing-model-with-15-000-designers-2
Chinhu chakakosha ndechekuti vagadziri vanowana mubhadharo wakavimbiswa zvisinei nekuti dhizaini yavo yakasarudzwa. Crowdsourcing haifanire kuve mukundi inotora zvese kana, sezvaunoisa, "hazvina kunaka kune vanogadzira"! Kana iwe uchida kuita kubvunzurudzwa kwangu kana kuita purojekiti yekuongorora nyaya kuburikidza neDesignCrowd ndapota taura ne http://twitter.com/designcrowd ????
Zvakare, heano mashoma logo dhizaini zviwanikwa pane yedu webhusaiti.
Jun 7, 2010 at 9:28 AM
Ndichiri kurumbidza kugona kwako kuGoogle “logo dhizaini”, ndinoona kuwanda kwese uye kupemberera kweakachipa logo dhizaini kunonyangadza. Iwo mawebhusaiti awakapa anongopa akapfava anotarisisa zvidhori (zvakafanana ne "zita rako pano"), pasina zano rekufunga chero.
Kusundira vanhu vakawanda logo masaiti - uchitumira matipi ekuona kuti unowana "yepakutanga" logo - inoseka kana isiri kuregeredza zvishoma.
Iwe wakarurama pane imwe pfungwa: iwe unowana izvo zvaunobhadhara. Nekudaro, tariro yangu kune vaverengi vako vangave vakaita zvishoma kwakafanira kushingaira vasati vapa logo yavo sechikamu chemakwikwi ekugadzira.
Mukuru, mutungamiriri wekugadzira
Jun 7, 2010 at 11:07 AM
Koshesa mhinduro (chaizvoizvo) uye ndinonzwisisa nzvimbo yakakanganiswa masangano ekuisa mabhii pasi kuti aratidze kukosha kwavo. Handina kupokana nezvekukosha kwako - ndakaona mafemu akaita saKristian Andersen achitora makambani kubva pasina kuenda kumazana emamiriyoni emadhora - mamwe acho ane chikwereti chekuzivikanwa kwemhando yavo.
Logo dhizaini iri kurwiswa - kwete kusiyana nechero imwe webhu-based kambani panguva ino. Tine vanhu vakaita saChris Anderson vachishevedzera "Mahara!". Vhidhiyo yekutambira saiti haigone kukwikwidza neYouTube, makambani eAnalytics akanetsekana neGoogle, uye CMS masisitimu senge squarespace inokwikwidza neWordPress.
Ini ndaigona kumira uye kupokana "Kwete Spec", asi ini pachangu ndakashandisa mamwe eaya masevhisi uye ndakawana yakanyanya kunaka mhedzisiro nawo. Hapana kuvanza chokwadi chekuti sezvausingavade, ivo vari kukura mukuzivikanwa. Uye kune kambani ine mari-yakasungwa uye isingakwanise hunyanzvi hwekumaka, wadii kuenda kune yakachipa, yakapfava logo? Vangadai vakaita pasina chimwe chinhu.
Ndinoda kuti iwe uite chinyorwa chekuti sei uchidzivirira mamwe / mazhinji emasevhisi aya!
Jun 9, 2010 pa 1: 38 PM
GeniusRocket (www.geniusrocket.com), inotungamirwa neaimbove-AOL exec Mark Walsh uye inomhanyisa naPeter LaMotte, ine kirasi yepasi rose yekuunganidza kugona kwelogos nezvimwe zvinodiwa zvekugadzira.
Nov 2, 2010 at 4:25 AM
Ndatenda nekugovera rondedzero!
Isu tichangotangisa nyowani logo dhizaini yemakwikwi saiti: http://www.logoarena.com
Gumiguru 10, 2011 pa 6:10 AM
Ndokumbirawo ubvise marvellogodesign kubva pane yako runyorwa nekuti iCHINHU.Ona http://pondpad.com/forum/viewtopic.php?id=3856 uyehttp://www.wordpressblue.com/2009/08/marvel-logo-designs/
Gumiguru 10, 2011 pa 8:16 AM
Thanks, Michael! Ini ndakavabvisa pane iyo rondedzero uye ndakawedzera Creattica.
Nov 30, 2011 na3:43 PM
Ngwarira kune Marvel Dhizaini Logo Dhizaini. Gara kure vane makore ekupindura. Kunyanya unprofessional.
Jul 3, 2012 pa 11: 54 AM
Apr 16, 2013 pa 7: 46 PM
Ndakagadzira logo munguva pfupi yapfuura http://www.logotypers.com Vakatora sketch yangu ndokuishandura kuita logo yehunyanzvi yemadhora gumi chete (asi iwe unofanirwa kurodha sketch, kana ppt kana chimwe chinhu chinovatungamira)
Apr 16, 2013 pa 8: 19 PM
Ipfungwa yakanaka sei! Ini ndawedzera Logotypes kune yayo yega chikamu. Ndatenda!
May 21, 2013 pa 6: 04 AM
Zvese zviwanikwa zvekugovanisa dhizaini zvinobatsira, zvinokatyamadza dhizaini ine yekugadzira mharidzo. Zvinhu zvakanaka zvakagovaniswa newe. Zvakawanda zvinotendwa uye kunzwa kutenda nekugovana kunodiwa.
May 13, 2015 pa 3: 26 PM
Ndinoda chinyorwa ichi. Chokwadi chauri kupa dzakasiyana siyana sarudzo dzevanhu uye zvinongedzo, waita zvakanaka…uyu muchengeti!
May 13, 2015 pa 8: 21 PM
Thanks zvikuru Gabriella!
Gumiguru 17, 2015 pa 1:34 AM
Apr 21, 2016 pa 8: 02 PM
May 30, 2016 pa 3: 12 AM
May 30, 2016 pa 3: 14 AM
makuru link, tnx
Chiratidzo mufananidzo wegirazi werudzi rwako. Resipi yako yekugadzira logo inonakidza kwazvo.
Hongu, iyo logo yeNike inodhura madhora makumi matatu neshanu pakutanga asi ikozvino yakakosha kudarika $35. Kugadzira chete logo yakanaka hakugone kukubatsira kusimudzira bhizinesi rako. Masevhisi ako uye zvigadzirwa zvinofanirwawo kuratidza kusimba kwelogo yako.
Gumiguru 4, 2017 pa 6:02 AM
Ini ndanga ndichitsvaga Logo Dhizaini pfungwa dzekugadzira yakasarudzika logo uye ndakawana yako positi. Ndinotenda nekuda kwechinyorwa ichi. Iine mamwe mazano akanaka ekushandisa muchirongwa changu chitsva.
Aug 29, 2018 pa 1: 30 AM
Ndatenda nemazano ako akakosha
Dec 20, 2019 pa 9: 16 AM
Iyo inoshamisa positi nezve logo dhizaini. Ini zvechokwadi ndawana kurudziro yakawanda kune itsva post. Thanks a ton for this Doug, merry xmas!
Jan 7, 2020 na4:08 PM
Ndatenda zvikuru nekuda kwemashoko akanaka Sally! Ndinovimba wanga uine zororo risinganakidze.
May 16, 2021 pa 12: 19 PM
Jun 29, 2021 at 9:49 AM
Dzimwe Logo Dhizaini Zvishandiso Izvo Zvakavimbiswa Kukurudzira